UK Oo Ku Dhawaaqday In Ayna USA Isku Halaynay Iskuna Tashanayo Haday Dagaal Galayo – Heemaal News Network
UK Oo Ku Dhawaaqday In Ayna USA Isku Halaynay Iskuna Tashanayo Haday Dagaal Galayo
Britain waa in ay u diyaar garowdaa inay dagaalada gasho, iyada oo aysan la jirin oo aan isku haleynayn dalka ay xulufada yihiin ee Mareykanka, waxaa sidaasi ka digay xoghayaha gaashaan dhiga ee Britain.
Hadalkiisa ayaa ku soo beegmaya xilli ay UK isu diyaarinayso inay fuliso “isbadalkii ugu qotada dheeraa ” ee siyaasadaha dhanka gaashaandhiga iyo ammaanka ee ak sameeyo tan iyo intii uu dhamaaday dagaalkii qaboobaa ee dunida.
“Waxaan ka walaacsanahay haddii ay Mareykanka la noqdaan hogaankooda ku wajahan arrimaha caalamka,” Mr Wallace ayaa sidaasi u sheegay wargayska Sunday Times.
Wasiirka gaashaandhiga ayaa iftiimiyey in loo baahan yahay in Britain ay arrintan qorsho ka yeelato.
Ben Wallace ayaa sheegay in dib u eegista lagu sameynayo arrimaha gaashaandhiga ay noqon doonaan kuwa ku saleysan in UK aysan ku tiirsanaan Mareykanka marka ay timaado dhanka dagaalada mustaqbalka.
“Fikirka jiray tan iyo 2010 ee ahaa in mar walba aan qeyb ka noqono isbahaysiga Mraeykanka, imika ma aha halka aan joogno iyo dhanka aan u socono,” ayuu intaa ku daray.